Shina: Kdo…Kdo…pfft · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 04 Janoary 2018 22:24 GMT
Toa nahatonga ny ampahany lehibe ao Azia, indrindra ny any avaratra atsinanana hitolona mafy hampiverina ny aterineto amin'ny laoniny ny horohorontany nanakaiky an'i Taiwan halina ka nanimba hosina anaty rano miisa enina.
Toa mahavita zavatra tsaratsara kokoa ireo efa manana fitaovana fialàna amin'ny sivana aterineto (proxies) ka nametraka izany tao amin'ny ôrdinaterany, fa ho an'i Hong Kong sy Shina Tanibe, voafetra ho ao amin'ny tranonkala ao an-toerana ny fahafaha-miditra aterineto, fa tratra ihany koa izy ireo. Tsy ahitana filazana momba ny horohorontany na ny fahapatahan'ny herinaratra ny vavahadin-tranonkala aterineto lehibe indrindra ao Shina, ny bilaogin'ny Sina.com, ary mihena ny hafangainan'ny RSS amin'ny fotoanan'ny sakafo maraina. Voakasika ihany koa ny MSN sy Yahoo!, na dia miasa ara-dalàna aza ny QQ sy GTalk. Milaza ireo bilaogera sasany fa tsy mandeha ny antso an-tariby mankany amin'ireo kaontinanta hafa
Mampiseho ny lahatsoratra iray avy amin'ny bilaogera tsy miankina Wang Pei fa tsy ny olom-pirenena Shinoa ihany no tafahitsoka ao amin'ny faritra, fa toa tsy hita amin'ny sarintany ihany koa ireo tranonkala sy ny mpiserasera Shinoa:
Mankalaza am-pifaliana ny Fanandramana ny LAN ao Shina
Ankehitriny, tsy manana fomba hifandraisana amin'ireo tranonkala Shinoa Tanibe ireo mpinamana antserasera Anglisy sy Japoney, ary matetika tsy azo i Sina sy Netease. Ao amin'ny MSN, olona vitsivitsy ihany no hitako. Tsy fantatro raha afaka mifandray ireo mpinamana antserasera any amin'ny firenena hafa.
Fanazavana iray azo atao dia ny andrana LAN Lehibe ao Shina. Atao andrana ankehitriny ny LAN. Ho lasa iray amin'ireo aterineto lehibe i Shina.
“Inona moa ny ‘Greater China LAN'?” hoy i Wang nanontany, miaraka amin'ny rohy mankany amin'ny lahatsoratr'ilay bilaogera namana He Caitou mikasika ny fiarahamiasa eo amin'ny China Netcom sy ny orinasa Amerikana Verisign izay nambara tamin'ny herinandro lasa teo, mba hametraka dindon-dohamilina ifotony mitodika (.cn) any Shina.
Narahina fanavaozam-baovao roa:
Samy mizaka ny olona ireo namana an-tserasera any Amerika sy New Zealand.
Manodidina ny telon-jato eo ny namako ao amin'ny MSN Messenger, saingy dimy monja no an-tserasera amin'izao fotoana izao, latsaky ny folo heny tsy toy ny mahazatra.
Avy ao Hexun, bilaogera zyx105106107, nanandrana namatantra ny antony mahatonga ny MSN tsy mety tafiditra ao amin'ny tolotra mpamatsy ny aterinetony, China Netcom, voalaza amin'ny lahatsoratra etsy ambony, izay nampifandraisany tamin'ny horohorontany izany.
Hatramin'ity maraina ity, tsy azo nidirana ireo tranonkala iraisam-pirenena sasany, anisan'izany ny tranokala ao an-toerana Yahoo! ny “MSN”, “Yahoo! Messenger”, ary tsy azo nidirana ihany koa ireo fitaovana fandefasan-kafatra an-tserasera hafa. Voamarina fa ny horohorontany tany Taiwan no nanimba ny seranan-tserasera iraisampirenen'i China Netcom.
Namaly i China Netcom: Efa nanamafy ny teknisiana fa noho ny horohorontany tany Taiwan, nikorontana ny seranan-tserasera iraisampirenen'i China Netcom, ka tsy afaka miditra amin'ireo tranonkala sasany any ivelany ny mpiserasera ao amin'ny firenena.
Mitanisa ny antsipirian'ireo hosina lehibe enina anaty rano tra-pahavoazana ihany koa i Zyx105106107:
1. 中美海缆于12月26日20：25 距离台湾枋山登陆站，9.7公里左右发生中断；
1. Vaky tamin'ny 8:25 ora hariva teo tamin'ny 26 Desambra ny Hosina Andranomasina mampifandray an'i Shina sy i Amerika, 9,7 kilaometratra miala ao Fangshan, .
2. Vaky tamin'ny 8:25 ora hariva teo tamin'ny 26 Desambra ny Hosina Lehibe Andranomasina Azia-Eoropa #3, 9,7 kilaometatra miala ao amin'ny fiantsonana Fangshan.
3. Vaky tamin'ny 00:25 ora teo tamin'ny 27 Desambra ny Hosina Lehibe Andranomasina Azia-Pasifika#2, 904 kilaometatra miala ao amin'ny fiantsonana Tamshui.
4. Simba tamin'ny 02:00 ora teo tamin'ny 27 Desambra ny Hosina Lehibe Andranomasina Azia-Pasifika#2 S3, 2100 kilaometatra miala ao amin'ny fiantsonana Chongming.
5. Vaky tamin'ny 8:43 ora hariva teo tamin'ny 26 Desambra ny ampahany amin'ny hosina Flag, rafitra Azia-Pasifika, miainga avy ao Korea mankany Hong Kong.
6. Simba tamin'ny 04:56 ora maraina teo tamin'ny 26 Desambra ny ampahany amin'ny hosina lehibe Flag, rafitra Azia-Eoropa, miainga avy ao Hong Kong mankany Shanghai.
6 andro izayShina